Ejegharị Iji Strasbourg Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Ejegharị Iji Strasbourg Site Train
(Emelitere ikpeazụ On: 17/03/2020)
Mgbe a njem kwuru na ịga France, ọtụtụ ndị ga-ntabi- na-eche nke Paris. Otú ọ dị, France isi obodo abụghị naanị obodo uru ịga na nke a mara mma mba, Ejegharị ejegharị na-Strasbourg bụ ọhụrụ IN. Ọtụtụ ndị ọzọ na ebe na-ahụ kwesịrị ekele maka niile ọmarịcha nlegharị anya na ahụmahụ ha nwere ike inye.
Strasbourg bụ otu n'ime ndị obodo na anyị nwere ike inye ekele ọzọ, ma n'ihi na ya mara mma na ụba nke ihe na-eme ebe ahụ. Ejegharị ji ụgbọ okporo ígwè Strasbourg si isi European obodo na-aga gị ume pụọ. Ka anyị nwere a nso lee anya na otú ị nwere ike ịga njem a egwu ebe na ihe i nwere ike ịhụ na-eme n'ebe:
Mgbe ejegharị Iji Strasbourg Gị The Strasbourg Cathedral
Cathedrals si ochie oge na-enchanting, na-emenye ụjọ na nanị ebube inyocha. na Strasbourg katidral anọchi ogologo n'etiti ha - nkịtị, dị ka ọ na-eji na-tallest ụlọ ke ererimbot ruo mgbe 1874! Ụfọdụ ya ụbọchị laa azụ na 1100, nke bụ ezi Agba otú oge a mere ihe akụkọ Ọdịdị e guzo. Ma ị na-ahọrọ na-inyocha n'ime ma ọ bụ arapara edebe facade, ị na-aga na-masịrị.
Were Pictures Of La Petite France
N'itinyekwu n'ime La Petite France-ele fọrọ nke nta ka na-aga azụ na oge. Na quaint nwa ọcha na ọkara osisi wuo owuwu stacked na district na-eji na-nwe ahịa nke ụdị, cobblestone n'okporo ámá, na omenala ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọ bụ a ebe ị nwere na-enweta. na-ese foto na were ya na gị na mgbe dị anya gara aga.
Marseilles na Strasbourg Ụgbọ oloko
Antwerp na Strasbourg Ụgbọ oloko
Lyon na Strasbourg Ụgbọ oloko
Idaba Na The Obodo Cuisine
maka nri njem nleta, e nwere ihe a pụrụ iche gastronomical emeso ka sampled mgbe ejegharị na Strasbourg: Alsatian nri, na ahụkebe mmanya na biya. Strasbourg akara na ndị Alsace region, ebe mmanya na-ukwuu n'ime varietal, na isi abụọ na-agbalị na-Gewürtztraminer na Riesling. Ụzọ nke ikpeazụ na pan-eghe azu kaapu ma ọ bụ Choucroute garnie, maara nke ọma Alsatian ochie, na obi ụtọ, gị okpo ọnụ.
Cologne na Strasbourg Ụgbọ oloko
Lille na Strasbourg Ụgbọ oloko
Zurich na Strasbourg Ụgbọ oloko
Metz na Strasbourg Ụgbọ oloko
Were A Boat Njem Around Strasbourg
Ọzọ ụzọ magburu onwe nke ịgagharị Strasbourg bụ via a ụgbọ mmiri siri. Ọ bụ a mara mma ohere iji lelee ụfọdụ nke obodo kasị mara mma nlegharị anya ma na-amụta banyere akụkọ ihe mere eme na n'otu oge ahụ. Enwere ọtụtụ ụgbọ mmiri siri nhọrọ ịhọrọ site na, na i nwere ike a di na nwunye nke echiche dị ka nke hotspot ileta esote.
Strasbourg nwere nke abụọ kasị ukwuu n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na France, nri mgbe Paris. Na-eru ya ụgbọ okporo ígwè bụ dịtụ n'ụzọ kwụ ọtọ, na ị nwere nhọrọ nke na-ewere elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè TGV (ụgbọ okporo ígwè na-agba.) Ọ pụrụ iwe gị si Paris na Strasbourg ke naanị 2 awa na 20 nkeji, kama nke mbụ 4 awa site ụgbọ ala.
Na pụtakwara na njem ugboro ọzọ isi European obodo nwekwara ukwu mkpumkpu. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na-Strasbourg si Switzerland, Belgium, Netherlands, Germany, na ndị ọzọ na mba Europe na obodo, ị pụrụ Strasbourg mfe na ngwa ngwa. Lebe anya n'abalị njikọ ma ọ bụrụ na ị na na na a tighter mmefu ego n'ihi na ndị tiketi ndị na-emekarị dị ọnụ ala karịa.
Njikere nwere oge nke ndụ gị ịgagharị maa mma obodo nke Strasbourg? Akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè ugbu a, na-enwe ma na njem na-aga.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-strasbourg-train%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#alsace #Ogbe europetravel Strasbourg tgv trainjourney Tranride Train Travel travelfrance
Ebe Iji Agba Chinese New Year Na Europe
Train Travel Britain, Train Travel France, Train Travel Holland, Ingbọ ologo Spain, Zụọnụ Ndụmọdụ